यसलाई गरिनेछ कसरी हामी सबै अग्रिम अगाडि अवकाश र योजना हेर्न। सबै भन्दा राम्रो छुट्टी कहाँ छ? निस्सन्देह, समुद्र! छैन यसलाई सुन्दर छ - समुद्र तट मा झूट, न्यानो पानी मा, पौडी खेल्न सूर्य भिजेको? राम्रो र हुन सक्दैन!
सबैले पनि अनुभवी पदयात्री कम थाह छ कि समुद्र गर्न लिन। तथ्यलाई कहिलेकाहीं यात्रा एक सफलता ठीक सानो कुरा मा निर्भर गर्दछ, र यस्तो trifles, विश्वास मलाई, धेरै छ।
के तपाईं समुद्र गर्न लिनु आवश्यक?
यसलाई सही सामान चयन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। समुद्र भूल छैन एकदमै होसियार सूर्य तत्काल आफ्नो टाउको Bake गर्न सक्ने हुनुपर्छ। फलस्वरूप, तपाईं खराब महसुस हुनेछ, र बाँकी बर्बाद हुनेछ। यो जोगिन, उज्यालो headdress लिन। प्राथमिक रंग - सेतो। म उनको टाउको कालो मा केहि लगाउने छैन। साथै, सूर्य एक छाता गर्मी सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
तपाईं आफ्नो घाम ल्याउन भने बाँकी धेरै सहज हुनेछ। हामी schurimsya सूर्य देखि, आफ्नो आँखा बाट स्ट्रिम च्यातिन्छ। विशेष चश्मा यी सबै समस्या जोगिन मदत गर्न।
समुद्र पनि आवश्यक झोला लिन छ। यो तपाईं क्रीम को एक किसिम, एक तौलिया, एक कम्बल र यति मा थप गर्नुहोस्। एक पर्स पट्टा गर्न राम्रो। आफ्नो हात वा खुट्टा यसलाई हुक र आफ्नो बहुमूल्य वस्तुहरू बारेमा चिन्ता बिना सुरक्षित sunbathe।
के तपाईं संग ले जो Plaid, ठूलो र बाक्लो हुनु पर्छ। यसलाई पर्याप्त ठाउँ हुनुपर्छ - तपाईं मात्र झूठ किनभने छैन तर पनि बाहिर कुराहरू राख्नु, र पनि हुन सक्छ।
समुद्र के लिने? , सजिलो निःशुल्क र धेरै सहज हुनेछ लुगा। समुद्र जाँदै, यो प्रकाश छोटकरीमा र एक ठूलो टी-शर्ट लगाउने सबै भन्दा राम्रो छ। यसरी तपाईं मात्र समुद्र तट मा पनि आवासीय क्षेत्रमा हिंड्न सक्छौं, तर। तपाईं कुनै पनि समयमा एक यात्रा मा जान चाहनुहुन्छ गर्न सक्ने भूल छैन।
मौसम परिर्वतनशील छ। मुख्यतया, यो तपाईं यदि आफैलाई सधैं कुनै पनि न्यानो लुगा हुनुपर्छ भन्ने हो। मानक किट: मोजा, ज्याकेट, ट्राउजर।
तपाईं sunbathe र पौडी खेल्न मात्र होइन इरादा संग समुद्र आइपुग्छ भने, त्यसपछि हो कि प्रकाशित गर्न लज्जित छैन लुगा साथ लिन निश्चित हुन। हामी लागि लुगा बारेमा कुरा गर्दै रेस्टुरेन्ट, डिस्को-बार त्यसैले, र। परिष्कृत केही लिएर लायक छैन। आस्तीन र प्यान्ट बिना प्रकाश शर्ट - महिला ककटेल पोशाक र मानिसहरू सीमित राख्नु गर्न सक्नुहुन्छ।
अतिरिक्त लुगा मात्र बाटोमा तिमी बाधा हुनेछ भनेर नबिर्सनुहोस्।
यो जूता दुई जोडी लिन सिफारिस गरिएको छ: तपाईं संसारमा प्राप्त गर्न सक्छौं प्रकाश shale र के। समुद्र shale आवश्यक। तल लाइन बालुवा सूर्य धेरै तातो छ भन्ने छ। ओह यसलाई भस्म गर्न धेरै सजिलो छ। स्लेट त्यस्ता समस्याहरूको जोगिन मदत गर्नेछ।
दोस्रो जुत्ता पनि, प्रकाश हुनुपर्छ। छाला जुत्ता लिनु छैन - सम्झना के तपाईं व्यापार कारोबार प्रवेश गर्न समुद्र मा आराम गर्न जाँदैछन्, र छैन। यो धेरै हिंड्न हुनेछ भनेर संभावना छ किनभने चयन गरिएको जूता को खुट्टा, थकित हुनु हुँदैन। खुट्टा सहज हुनुपर्छ। कुनै पनि मामला मा उनि पसिना छैन।
समुद्र के लिने? : तपाईं कस्मेटिक्स को पर्याप्त नम्बर आवश्यक लिनु , sunblock त्यसैले उहाँलाई पछि, र। भरोसा आफूलाई प्रयास गरेको कस्मेटिक्स। कुनै व्यक्तिगत अनुभव छ भने, त्यसपछि आफ्नो मित्र को राय सुन्न।
सामान्य मा, समुद्र को कस्मेटिक्स धेरै लिन्छ। यो जायज छ? हो, तर उपाय अझै पनि जान्नु आवश्यक छ। साँच्चै उपयोगी छ भन्ने कुरा लिनुहोस्।
लागूपदार्थ उल्लेख गर्न, समुद्रलाई लिन के छैन कुरा। कुनै पनि पर्यटक को चिकित्सा किरा पट्टी, आयोडिन, मलहम, एस्पिरिन, paracetamol, analgin, वाकवाकी र पखाला, ऊन र यति मा को ट्याब्लेटको हुनुपर्छ।
कुनै एक सानो चोट लागेको, चोटपटक, scrapes, टाउको दुखाइ, अपच र यति देखि प्रतिरक्षा छ। समुद्र के लिने? एक कठिन अवस्थामा फिर्ता सामान्य नै ल्याउन मदत गर्नेछ भन्ने कुरा। सामान्य मा, यो उत्पादनहरु अलग किन्न र विशेष मिनी-पहिलो सहायता बस यस्तो अवसरका लागि डिजाइन गरिएको छ कि किरा किन्न छैन सिफारिस गरिएको छ।
संसारको सबैभन्दा सुन्दर देश के हो? 10 संसारको सबैभन्दा सुन्दर देशहरूको
चाँडै विदेश र एक पासपोर्ट लागि राज्य शुल्क तिर्न जहाँ थाहा छैन?
घर मा आंत्र कसरी सफा गर्न
कसरी पैन मा कड खाना पकाउनु: धेरै व्यञ्जनहरु
एक बच्चा मा Stuffy नाक गराउँछ।